Manchester City oo si rasmi ah ula soo wareegtay Goolhaye Claudio Bravo… + SAWIRRO – Gool FM
Manchester City oo si rasmi ah ula soo wareegtay Goolhaye Claudio Bravo… + SAWIRRO
(Manchester), 25 Agoosto 2016 –Kooxda Kubadda Cagta Manchester City ee waddanka Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday in ay 15.4 Milyan oo Gini ay kula soo wareegtay goolhayihii kooxda Barcelona, Claudio Bravo.
Goolhaye Bravo ayaa City u saxiixay heshiis 4 sanadood ah, waxaana uu mushaar ahaan u qaadan doonaa 100,000 giniga istarliinka ah isbuucii, taasoo noqonaysa laba jibbaar intii uu ka qaadan jiray Barcelona.
33 jirkani u dhashay Chile ayaa kulankiisa ugu horreeya Manchester CIty u safan doona Axadda ciyaarta ay la yeelan doonaan West Ham United, isagoo sidoo kalena la filayo in Pep Guardiola uu ku darsado liiska xiddigihiisa ka qayb galaya Koobka Horyaallada Yurub xilli ciyaareedkan.
La soo wareegidda City ee Bravo ayaa ka dhigan in uu gabaabsi yahay waayihii goolhayaha ugu kulan safashada badan kooxdan ee Joe Hart, kaasoo day dayana koox uu u wareego.
Taageerayaasha Barcelona oo laga dhex dareemay tartan ay Adidas u qabatay kuwa Real Madrid